FirstBlood စျေး - အွန်လိုင်း 1ST ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FirstBlood (1ST)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FirstBlood (1ST) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FirstBlood ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $6 413 232.00
volume_24h_usd: $8 763 080.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FirstBlood တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FirstBlood များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FirstBlood1ST သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.096FirstBlood1ST သို့ ယူရိုEUR€0.0812FirstBlood1ST သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0735FirstBlood1ST သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0873FirstBlood1ST သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.853FirstBlood1ST သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.605FirstBlood1ST သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.12FirstBlood1ST သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.357FirstBlood1ST သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.127FirstBlood1ST သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.134FirstBlood1ST သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.13FirstBlood1ST သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.744FirstBlood1ST သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.515FirstBlood1ST သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7.18FirstBlood1ST သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.16.2FirstBlood1ST သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.132FirstBlood1ST သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.147FirstBlood1ST သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.98FirstBlood1ST သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.667FirstBlood1ST သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥10.26FirstBlood1ST သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩113.78FirstBlood1ST သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦37.18FirstBlood1ST သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7.01FirstBlood1ST သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.64
FirstBlood1ST သို့ BitcoinBTC0.000008 FirstBlood1ST သို့ EthereumETH0.00025 FirstBlood1ST သို့ LitecoinLTC0.00176 FirstBlood1ST သို့ DigitalCashDASH0.00106 FirstBlood1ST သို့ MoneroXMR0.00108 FirstBlood1ST သို့ NxtNXT7.49 FirstBlood1ST သို့ Ethereum ClassicETC0.0141 FirstBlood1ST သို့ DogecoinDOGE27.7 FirstBlood1ST သို့ ZCashZEC0.00117 FirstBlood1ST သို့ BitsharesBTS2.96 FirstBlood1ST သို့ DigiByteDGB3.07 FirstBlood1ST သို့ RippleXRP0.341 FirstBlood1ST သို့ BitcoinDarkBTCD0.00331 FirstBlood1ST သို့ PeerCoinPPC0.318 FirstBlood1ST သို့ CraigsCoinCRAIG43.73 FirstBlood1ST သို့ BitstakeXBS4.09 FirstBlood1ST သို့ PayCoinXPY1.68 FirstBlood1ST သို့ ProsperCoinPRC12.04 FirstBlood1ST သို့ YbCoinYBC0.00005 FirstBlood1ST သို့ DarkKushDANK30.8 FirstBlood1ST သို့ GiveCoinGIVE207.89 FirstBlood1ST သို့ KoboCoinKOBO21.87 FirstBlood1ST သို့ DarkTokenDT0.0884 FirstBlood1ST သို့ CETUS CoinCETI277.23